Soomaaliya oo kaalinta hore ka gashay dalalka ugu musuq maasuqa badan Adduunka | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Soomaaliya oo kaalinta hore ka gashay dalalka ugu musuq maasuqa badan Adduunka
Soomaaliya oo kaalinta hore ka gashay dalalka ugu musuq maasuqa badan Adduunka
Jan 27, 2016ARRIMAHA BULSHADA, WARAR
Hay’adda Transparency International ayaa sheegtay in Soomaaliya a safka hore kaga jirto wadamada ugu musuq maasuqa badan adduunka, kadib warbixin cusub oo ay soo bandhigtay.
Warbixintan cusub ayay Hey’addu u diiwaan gelisay in Soomaaliya, Kuuriyada Waqooyi iyo Afghanistan ay yihiin wadamada ugu hooseeya ee ugu musuq maasuqa badana adduunka
Hey’adda Transparency International ayaa warbixinteeda sanadlaha ah oo ay baahisay maanta oo arbacdo ah taariikhduna tahay, 1/27/2016, ayay ku sheegtay in fikradaha laga uruuriyay khuburo ka kala socda adduunka lagu cabiray heerka musuq maasuqa ee qeybta dhaqaalaha ay dowladaha maamulaan.
Dalalka ayaa lagu cabiray dhibco u dhaxeeya 1 illaa 100, ayada oo dhibcaha yar ay la macno yihiin musuq maasuq badan.
Soomaaliya iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa warbixinta ay siisay 8 dhibic midkiiba, halka Afghanistan ay heshay 11, taasi oo macanaheedu yahay in Soomaaliya iyo Korea-da Woqooyi ay wadaagaan kaalinta koowaad ee dalalka ugu musuq maasuqa badan caalamka.
Ma jirin dal helay dhammaan boqolka dhibcood, waxaase 91 helay dalka Denmark, halka Finland iyo Sweden ay heleen 90, kuwaas oo ah dalalka ugu musuq maasuqa yar.
Sidoo kale Mareykanka ayaa warbixintan lagu xusay inay heshay 76 dhibcood, heerka musuq maasuqa Adduunka.
Hay’adda Transparency International, ayaa sheegtay in 6 bilyan oo qof oo ah badi dadka adduunka ay ku nool yihiin dalal musuq maasuq xooggan uu ka jiro
Previous PostQaxooti ka badan 1200 oo ruux oo laga soo badbaadiyay xeebaha Talyaaniga Next Post(sawiro Iyo Muqaal) Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya oo 6 qodob ka soo saaray Shirar lagu guul sareystay oo ka dhacay dalka